फुरुंग वर्षा - मनोरञ्जन - नेपाल
भैरे फ्लप भएर के भयो, वर्षा शिवाकोटीलाई फिल्मको खडेरी भए पो ! अझ अचम्मलाग्दो कुराचाहिँ, उनका फिल्म फ्लप हुन्नन् मात्र, अभिनयले पनि खासै तारिफ पाउँदैनन् । तर, कामको अभाव हुन्न । जस्तो : भैरेको असफलताको चोटलाई गोपीले मल्हमपट्टी लगाएको छ । दीपेन्द्र लामा निर्देशित गोपीमा वर्षा मुख्य भूमिकामा चयन भएकी हुन् । अपोजिटमा छन्, खगेन्द्र लामिछाने । पुरानो बुलेटको सुटिङ सक्दानसक्दै गोपीमा अनुबन्ध भएकी हुन् । १ भदौमा उनी अभिनीत जय शम्भु प्रदर्शन हुँदैछ । ट्रेलरमा अनुपविक्रम शाही र प्रशान्त ताम्राकारपछि वर्षालाई महफ्व दिइएको छ । प्रमोसनमा पनि उनकै हालीमुहाली हुने पक्का छ । अनि, फुरुंग नपर्नु पनि कसरी !
प्रकाशित: श्रावण २६, २०७५